Torohevitra hifehezana ny fandatsahana alika Torohevitra hifehezana ny fandatsahana alika | Tontolo alika
Ara-dalàna ho an'ny alika ny mandatsaka ny volony sasany, na izany aza.ohatrinona ny volon'izy ireo tokony ho very hahafantarana raha be loatra izany?
Ny ankamaroan'ny alika dia nandatsaka ny volony, indrindra nandritra ny vanin-taona mafana ny alika mamoy volo betsaka dia mety hanana zavatra matotra kokoa any aoriana toy ny allergy, tsy fifandanjan`ny hormonina, mites, trauma na aretina.
Na dia mahazatra aza ny ankamaroan'ireto biby ireto dia mandatsaka ny volon'izy ireo amin'ny fotoana iray amin'ny taona, raha clumps lehibe volom-bolo manjavozavo mora latsaka na raha mihalefaka ny palitaon'ny alika ka afaka mahita ny hodiny, midika izany fa be loatra ny volon'ny alika alatsaka ary manana olana.
Ny alika very volo dia afaka mivoatra amin'ny toe-javatra matotra, na dia tsy mitranga foana aza izany, raha ny marina, ny ankamaroan'ny fihenan'ny volo amin'ny alika dia mitranga vokatry ny fepetra izay azo tsaboina. Ny antony mahazatra indrindra dia ny allergie de contact, ny alla parasy ary ny allergy momba ny sakafo.
Raha ny allergy, volo dia vokatry ny ratra izay ataon'ny biby mihitsy.
1 Antony fihenan'ny palitao amin'ny alika
1.3 allergie na tsy fahazakana
2 Tsy fifandanjana hormonina
3 Fitsaboana ny fihenan'ny volo amin'ny alika
3.2 Ovao ny sakafon'ny alika
3.3 Mandalo fitsaboana hormonina
3.4 Mampiasà shampoos sy plastika hydrocortisone
Antony fihenan'ny palitao amin'ny alika
Ny fatiantoka palitao alika dia mety hitranga noho ny antony samihafa:
Ny bibikely sasany dia tompon'andraikitra amin'ny scabies. Ireo dia mety hanimba ny hoditry ny alika ary hitarika hihena volo. lagaly miteraka fikolokoloana ny hoditra, mahatonga ny alika hanakorontana be loatra.
Ny fihenan'ny volo ateraky ny trauma dia mitranga matetika kokoa ary dia ny vokatry ny milelaka alika mitohy amin'ny hodiny.
Ity aretina ity, fantatra amin'ny anarana hoe acral lick dermatitis, dia manimba ny follicle volo ary miteraka fihenan'ny volo. Ny trauma dia mety hitranga amin'ny a fanehoan-kevitra faharoa momba ny ratra.
alika mety tsy mahazaka ny sasany sakafo, ary koa parasy. Ny karazana alika sasany dia mora tohina noho ny hafa, toy ny Golden Retrievers, Bulldogs, ary Yorkshire Terriers.
Very palitao noho ny allergy, mahatonga ny mena eo amin'ny hoditra, mangidihidy sy ny fisehon'ireo vongan-tany.
Ny areti-mifindra isan-karazany dia mety hahatonga ny palitaon'ny alika handatsaka, ao anatin'izany follikulitis ary Cancer. Amin'ity tranga ity, dia azo inoana fa hahatsikaritra nodules isika na tsy misy pus, scaling ary mena.
Tsy fifandanjana hormonina
Betsaka ny tsy fandanjana hormonina no mety hiharatsy ny volo amin'ny alika. Ny aretin'ny tiroidia, ny dwarfisme pituitary ary ny tsy fahampian'ny fihary adrenal, izy ireo dia mety hiteraka fihenan'ny volo miandalana.
Fitsaboana ny fihenan'ny volo amin'ny alika
Ny fitsaboana ny alika raha sanatria very ampahany amin'ny palitaony dia miankina amin'ny antony, noho izany ny zava-dehibe indrindra dia ny ahafahantsika mitazona io aretin-tsaina io.
Afaka ny vet manome fanafody antibiotika hitsaboana aretina izany no mahatonga ny fihenan'ny volo amin'ny alika.
Ny dokotera dia mety mila manala ireo nodule na fivontosana mifandraika amin'izany izay manampy amin'ny fandatsahana sy fitsaboana ny alika amin'ny antibiotika, ary koa ireo fanafody hafa mety amin'izany.
Ovao ny sakafon'ny alika
Raha mihevitra ny mpitsabo biby fa ny fihenan'ny volo an'ny alika dia a allergy amin'ny sakafo rehetra, avy eo dia ilaina ho antsika ny manafoana ireo sakafo resahina amin'ny sakafonao. Ny mahazaka sakafo mahazatra indrindra amin'ny alika dia ny varimbazaha, katsaka, soja, atody, ary na ny hen'omby na akoho aza.
Mandalo fitsaboana hormonina
Raha manana tsy fitoviana hormonina ny alika, ny suplementaires dia afaka manakana ny fandatsahana palitao ary ampio ny alikao hamelombelona. Ireo mpitsabo biby dia afaka mihazakazaka fitsapana hamantarana raha hanampy amin'ny famahana ny olana ny fitsaboana hormonina.
Mampiasà shampoos sy plastika hydrocortisone
Azonao atao ny mitsabo ny misolelaka be loatra ary manamaivana ny hoditra mangidihidy, raha mampandro ny alika aminay izahay shampoo manokana ho an'ny alika misy hydrocortisone.
Hydrocortisone mampitony ny hoditra sosotra ary afaka manafaingana ny fanasitranana izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Torohevitra hifehezana ny fandefasana alika
Fomba ahazoana fanajana alika